Kudzorerazve bhuku rekare neDebian uye Raspberry Desktop | Linux Vakapindwa muropa
Inogona kunge iri imwe yenyaya dzerudo idzo cinema inotipa isu reZuva raValentine. Musikana aifunga kuti akasiiwa zvachose, anowana mukomana anounza zvakanakisa maari uye anomupa hupenyu hutsva. Chete raive vhiki mushure meZuva raValentine uye musikana ibhuku rekare. Kana ari mukomana, ndiDebian Buster neRaspberry Pi desktop.
Ndanga ndichida kuve neChannelbook kwenguva yakareba, kwete sedare asi sechirevo. Pfungwa yekombuta ine lightweight inoshanda sisitimu isina zvakati wandei kupfuura bhurawuza yekubatanidza kune ekushandisa online. Chinhu chega icho panzvimbo peGoogle, chingave changu cheangu Nextcloud kuisirwa.
Mwanasikana weshamwari akarasa bhuku rekare reCompaq Presario CQ40300LA, mukana wandakatora pamhepo. Hunhu hwemidziyo ndeiyi:
14.1 inch LCD skrini
Intel Celeron 585 2,16 GHz microprocessor
Intel Graphics Media Accelerator 4500M vhidhiyo kadhi (rakabatanidzwa)
Altec Lansing Vatauri
Webcam ine maikorofoni
Windows Vista Inoshanda Sisitimu
6-sero Lithium-Ion Bhatiri (47Whr)
Pasina mubvunzo kutaura, chinhu chekutanga chandakaita pandakanga ndiine kabhuku kaive mandiri kubvisa Windows Vista. Sezvo chirongwa cheChbookbook chakamiswa kudzamara ndatenga bhatiri nyowani, ini ndaida kuyedza yakazara kugovera iyo yaizoshanda pane akareruka makomputa.
1 Kumutsiridza bhuku rekare
2 Rudo pakutanga kuona
Kumutsiridza bhuku rekare
Ini ndakatanga nekuyedza kumwe kwekuparadzirwa kwakaitwa naManjaro, asi, iyo yekumisikidza yakanga isingachinjike nehuwandu hwe RAM uye ikaramba kuenda kumberi.
Ipapo ndakaedza naLubuntu 20.10. Mune ino kesi kuiswa kwacho kwakafamba mushe, zvakafanana nebhutsu. Paive nezvipingaidzo zviviri. Ini ndiri pedyo kwazvo uye zvainge zvakandiomera kuti ndione mamamenyu. Kune rimwe divi, ini ndaifanira kuisa Chromium nekuti kuyedza kuvhura chero peji neFirefox kwaizotomesa system.
Inotevera pane iyo runyorwa yaive Linux Mint 20.1 ine XFCE desktop. Kuiswa kwakafamba mushe, uye mashandiro akangoiswa aingova akakwana.
Asi, pakanga pasina chemistry. Yakanga isiri chidimbu chemidziyo yandaida kushandisa kana zvaisakosha. Ini ndichangobva plugged mucomputer kugadzirisa iyo inoshanda sisitimu.
Mamwe maakaundi andinoteera paTwitter akataura nezve vhezheni yeiyo Raspberry Pi inoshanda sisitimu yakagadzirirwa makomputa edesktop.
Kuvaka paDebian Buster, kugovera kunopa Raspberry Pi OS desktop, pamwe neakawanda esoftware inouya neRaspberry Pi OS, kune chero PC kana Apple Mac komputa.. Kunyangwe iwo mufananidzo unoteedzerwa unoshandiswa kune ese makumi maviri nemasere nemakumi matanhatu nematatu, iyo yekumisikidza chirongwa inokutendera iwe kusarudza kuti ndeapi mapurani aunoda kuaisa.
Iyo yekumisikidza midhiya inogona kugadzirwa nechero chakajairika maturusi. Kana iwe ukashandisa pendrive, iwe paunotanga iwe uchave nesarudzo yekutanga mumararamiro maitiro nekushingirira kana pasina kushingirira. (Uchishandisa kushingirira iwe unogona kuchengeta shanduko dzaunoita kune yekuisa midhiya uye ivo vanozotakurwa pese paunotanga.
Dai ndisina kuona kuti yakauya neWindows Vista uye pachezvangu ndakaisa Raspberry Pi Desktop, ndingadai ndakapika kuti iyi ndiyo sisitimu yekushandisa yakabva kufekitori. Iko kusanganisa kwakaringana zvekuti kunyangwe bhatani rekudzima rinoshanda, iro risina rimwe remamwe maviri ekuparadzira Linux ini ndakaedza zvakaitika.
Ose ari maviri network yeWiFi uye webcam yakashanda kekutanga. Desktop mashandiro ese ari maviri ehupenyu mode uye kamwe yakamisikidzwa yakazara mvura. Muchokwadi, ini ndaive nemashanu maChromium tabo akavhurwa pasina dambudziko.
Iyo graphical interface inoyeuchidza zvekare yeGNOME yekare. Bhawa repamusoro rinokupa mukana wekushandisa menyu, browser uye maneja wefaira kuruboshwe. Kurutivi rworudyi wachi nezviratidzo.
Pakati pekusarudzwa kwesoftware tinowana vazivana vekare; LibreOffice, iyo VLC inoridza vhidhiyo uye iyo Chromium browser. Uye zvakare, kusarudzwa kwenzvimbo dzekuvandudza dzePython neJava uye IC emulator inosanganisirwa.
Kubva kuSoftware Center iwe unogona kuwedzera akasiyana mazita kubva kune anowanikwa eGNOME neKDE.
Imwe drawback ndeyekuti haina kunyatso kududzirwa, saka zita remafaira uye menyu ezvimwe zvinoshandiswa zvinoramba zviri muChirungu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kudzoreredza bhuku rekare rekare naDebian uye Raspberry Desktop
Davino sieger akadaro
Zvinonzwika zvakanaka, pachave nedzidziso yekuti ungaiisa sei paYouTube?
Pindura Davino Sieger
Ini handina kutarisa, zvakadaro, inoisa senge chero Debian
Iri kuenda yakasarudzika, iwe chingofanire kubvisa Microsoft's telemetry.
Ndine Dell Latitudes D610 kubva muna 2005 kwechinguva ichimhanya neDebian 10 Yakagadzika makumi matatu nemaviri, ine Mate nharaunda uye inoshanda 32A, pasina kugodora chero chazvino uno
Zvirinani Bunsenlabs bvunzo nebhokisi rakavhurika uye zvese zvakanaka ini ndine Acer ine Intel atom uye inoshanda mushe
Ndine Dell Latitude D610 laptop kubva muna 2005, 40 Gig HDD, 32-bit Pentium uye 2 Gigs ye RAM inoshanda nenzira inogodomoka neDebian 10 Stable uye Mate giraidhi nharaunda, zvirinani pane nyowani. Havachaiti sepakutanga…
Ugh, zvave kuwedzera kuomarara kumutsa zvishandiso zvekare, kunyanya kunyangwe zvichikwanisa kuenderana ne64-bit masisitimu, mazhinji emidziyo iyi akagadzirwa aine makumi matatu nematatu masisitimu mupfungwa uye nekudaro, zviwanikwa zvinowanzo kuve zvishoma kana iwe uchida kuisa 32 bit system.
Michael. Pane zvingasarudzwa pane zvese. Ndine dell inspiron 1525 chete semutambi, nePuppyLinux unogona kugadzirisa Firefox uye inomhanya zvese zviri zviviri Netflix ne Prime, Disney, DirectvGO, uye chero chikuva chisina kucheka kana chero chinhu.
Kunyangwe Spotyfi anobva kuFirefox anowedzera-ons
Yakauya kwandiri gore rapfuura, ñCompaq Presario 40. Chidzitiro chete hachishande saka chakabatana nechengetedzo.
Ubuntu 16 + mupen64 + mame + znes. Chinangwa chikuru kupfuudza iyo yekuisa
Iri bhuku rekuverenga rine nharembozha Intel GL40 yechokwadi kuti inogona kushandisa processor yekugadzirisa, ini ndinenge ndine chokwadi chekuti chipset yainayo inotsigira Intel Core 2 Duo T7200 uye ine ma module maviri e2GB DDR2 2MHz uye ine economical solid state disk ye800GB ArchLinux yaizofamba zvakaringana neLXDE